Isikhokelo samashishini amancinci kuLawulo lweeNtlalontle | Martech Zone
Andiqinisekanga ukuba lonke ishishini likulungele ukutyala imali kwisicwangciso seendaba zentlalo. Kukho iinkampani ezinje ngeApple ezinemveliso engakholelekiyo, intengiso emnandi, kunye neemveliso ezinkulu eziqhuba ukuthengisa kuluntu olusebenzisa kuzo. I-Apple ayifuni ukuba isebenze kwimidiya yoluntu ukuze iphile kwaye ichume. Ezinye iinkampani zikwisiphelo esichaseneyo, kunye nenkonzo yabathengi kunye nemicimbi yolwaneliseko lwabathengi. Ukuthintela imithombo yeendaba zentlalo inokuba sisicwangciso esihle de babe banokulungisa iinkqubo zabo kunye neemveliso.
Kodwa, kwinkampani enqwenela ukuthatha isabelo sentengiso, ukwakha igunya, ukwakha ifuthe kunye nokukhulisa ishishini labo, imithombo yeendaba zentlalo lixabiso eliphantsi, imizamo ephezulu yokwenza oko. ndithi phezulu Umzamo kuba kufuna ixesha kunye nokuzinikezela kuwe kunye neqela lakho ukuvelisa umxholo kunye nokubonelela ngexabiso lokukhulisa abaphulaphuli bakho nokwakha uluntu. Oku kuyinyani ngakumbi kumashishini amancinci angenayo imali 'yokuthenga' intengiso eyimfuneko ukuze ikhule.
Imithombo yeendaba kwezentlalo ibalulekile kwisicwangciso sokuthengisa seshishini elincinci! Umbuzo ozingisayo ngulo: "Ungalifumana njani ishishini lakho kwezorhwebo?". Fumanisa Isikhokelo Samashishini Asakhasayo kuLawulo lweMidiya yezeNtlalontle, i-infographic entsha kraca ekuze nayo Ivenkile yeMarike kwaye Indawo!